OMER BERIZIKY : NIVOAKA TAMIN’NY FAHANGINANA – MyDago.com aime Madagascar
OMER BERIZIKY : NIVOAKA TAMIN’NY FAHANGINANA
Amim-panetretena lehibe no itodihako aminareo rehetra tsy ankanavaka amin’izao ankatoky ny fifidianana fihodinana faharoa ny ho Filoha voalohany ny Repoblika faha-efatra ampiarahana amin’ny fifidianana Solombavam-bahoaka izao.
Mbola mamerina ihany koa ny fisaorana tamin’ny fahendrena sy ny fahamatorana ary ny filaminana nasehontsika tamin’ny fanatanterahana ny fifidianana Filohan’ny Repoblika fiodinana voalohany tamin’ny volana oktobra lasa teo aho.
Koa satria hiatrika fifidianana roa sosona isika rahampitso 20 desambra dia manao antso avo amin’ny tsirairay aho, fa indrindra aminareo izay manan-jo hifidy manerana ny nosy, mba ho tonga handray anjara mavitrika amin’io andro io hanatanteraka ny adidy masina amin’ny Tanindrazana.
Aoka isika ho tony, tsy hanaiky horebireben’ny mpanakorontana isan-karazany, amin’ny endriny samihafa fa hanam-piniavana sy risipo haneho an-kalalahana ny safidintsika ao anatin’ny fanajana ny fihavanana sy ny fahendrena malagasy.
Ianareo mpitandro filaminana dia antsoina hanatanteraka ny adidy izay ankinin’ny firenena aminareo amin’ny fanajàna hatrany ny fianianana efa nataonareo ho an’ny Tanindrazana.
Farany, isika rehetra mpiasam-panjakana manerana ny Nosy manana andraikitra amin’ny fikirakirana ny fifidianana dia:
Aoka hanaja ny fanatanterahana ny andraikitsika mba ho mendrika eo amin’ny fitantanana, ka ho tonga lafatra izao fifidianana izao.
Aoka isika hitazona hatrany ny tsy fiandaniana na amin’ny atsy na amin’ny aroa eo am-panatanterahana ny adidintsika amin’ny maha-mpiasam-panjakana antsika ka tsy hanaiky ho ataon’olona fitaovana haneriterena ny mpifidy na sanatria hanodikodina ny safidim-bahoaka, fa tompon-antoka isika amin’ny toerana izay iasantsika.
Aoka isika rehetra hanatanteraka ny asantsika ao anatin’ny fahamendrehana, ny fahamarimanana sy ny filaminana.
Koa dia mirary soa indrindra ho antsika rehetra.
Ho ela velona anie i Madagasikara Tanindrazantsika.
Manohana an’i Omer Beriziky ny Mpiasam-panjakana Ambony
Auteur Solo Razafy*Publié le 19 décembre 2013 Catégories Politique
9 réflexions sur « OMER BERIZIKY : NIVOAKA TAMIN’NY FAHANGINANA »
Efa tara rangahy ity a!!!aiza ilay patron-nao???lasa mpifosa vao mifafa trano!!
Tompon’andraikitra ianao @’ireo faty eraky ny Nosy manontolo !!saribakoly BEU!!!
Hay misy manana zo hifidy sy tsy manana???MAIVANA be rangahy ity a!!!fa taiza foana ianao hatr’izay???
Sahy mijery fitaratra ve ainao @’izao fahavoazan’ny firenena izao??rehefa tsy vita farafaha-ratsiny tsy nomena
izay nahavita azy, fa sady mibodo toerana fotsiny, nefa tsy hiira no tsy hanao tsianjery, vongany be fotsiny.
Lozanao ry ingahy PM izao fahavoazana mahazo ny tanindrazana izao, ho tsarain’i tantara ianao sy ny taranakao.
19 décembre 2013 à 22 h 07 min
Ny ahy ny hafatra omeko ny mpifidy sy ireo tompon’andraikitra ,
Raiso raha misy manome vola fa volantsika ihany ireny, tsy afaka maninona eo ireo
fa ny zavatra hiandry ireo aza tsy ho zakany, na asivo fakan-drivotra kely any @ sisiny
dia nitsaitsaika mora rehefa tafiditra any amponja tsirairay ilay ( bibikely tsy azo lazaina
anarana) hoy Dokotera izay.
Tsy mila tenenina ny olona fa mandeha mifidy ho azy. Na orana mikija na rivotra mifofo. Efa leo e! Hifidy ny tena patrô tena izy.
20 décembre 2013 à 2 h 23 min
Ngamba kosa tsy patron no hofidiantsoka fa mpanampy ny vahoaka e.
Entano ny rehetra hande hifidy satria anio no fotoana nifanarahantsika hanendasana ny foza. menaka Ar 50 dia ampy satria andrahoana @ rano lo hijalijaly fa tsy amin’ilay menaka 1 litatra Ar 2500
20 décembre 2013 à 4 h 40 min
Misy ilay vavaka nosoratako iny ao aza adino rehefa andeha ifidy ianao,mba atanteraka lay tenin’ny Soratra masina:mba ho vava iray sy saina iray,HOMBA ANTSIKA A/TRA
Fa mba inona aloha ny asa tena mivaingana mba nataonao r’Ingahy, ankaotry ny fanaovan-tsonia an’ilay décret nofohanan’ny CES, izay nanome fahafahana an’ilay mpanongana hisekoseko ny hanohana kandidà maro be ?
Nahoana no tsy nampiarinao antsakany sy andavany ilay tondrozotra ?
Ny bilan-nao dia zéro, ary anisan’ny tompon’andraikitra amin’izao fahavoana izao koa ianao !
Ny fozaorana anie ka tsy fihinana ê ! Aza mandany menaka amin’izay foza orana, fa tehirizo ny menaka hikarakaràna sakafo mendrika kokoa !
Ny alika aza mety ho tsy tia an’ireto biby kely tsy tian’ilay olona izay tononin’anarana !!!
Gaga koa mantsy aho hoe: taraiky indray Kintana izany??
Io ataovy maimbo fa fanetry BEU!!!mpiatsaraivelatsia alika maty , tsy tahotra tsy henatra.
Tsy misy nilana anao afa tsy ny fahavoazana ra berizika a!!ndana MIBEBAKA na MAMATO-TENA
fa aza eo no manetsi-keloka eo fa vao maika MANOME LITIKA na ny MIJERY ANAO AZA.
Aza manome tsiny an’img Beriziky ianareo fa ny mouvance Zafy no tena tsy misy ilan’azy @io
Précédent Article précédent : FARADOBOKA TAO ANTSONJOMBE : FAHOMBIAZANA TANTERAKA
Suivant Article suivant : ME HANITRA : Tsy mipetrapetra-potsiny ny movansy Ravalomanana fa efa maka fepetra rehetra ary mampahafantatra ny olona ny zavatra misy.